July Dream: July 2007
uav;rsm; ESifh tqdyfaphwrsKd;
þ&mpk ESpfydkif;wGif &efukefNrdKYwGif;&Sd tqdyfoifh vlem vufcH&m Xmersm;odkY enf;rsKd;pHkjzifh tqdyf oifhcH&aom vlemrsm; tcsdeftcg ra&G;a&muf&Sd vmwwfMuNyD; ¤if;wdkY\_ ta&twGuf rSmvnf; waeYwjcm; wdk;yGm;vsuf &Sdonfudk awGY&avonf/ taBumif; trsdK;rsdK;aBumifY tqdyfoifYí a&muf&SdvmBuaom vlemrsm;rSm trsm;tm;jzifY vlrIa&;? pD;yGm;a&;? ynma&; tqifrajy jzpfaomaBumifY pdwfnpfí vkyfrdvkyf&mudk jyKrd&mrS a&muf&SdvmBujcif;jzpfonf/ ¤if;wdkY oHk;pGJaom ypönf;rsm;rSmvnf; acsmif;qdk; aysmufaq;? tdyfaq;? ESvHk;aq;? tzsm;aysmufaq;ponfY aq;0g;rsm;rSpí a&eHqD? "gwfqD? t&ufysH? aBuG*sD;cGßwfaq;? ydkvdk*sydk;owfaq; txd &SdBuavonf/
tqdyfoifh olrsm;\_ wlnDaomtcsufum; w'*FtwGif;jzpfay:aom pdwfzdpD;rIudk rcHedkifí aomufoHk;rdBujcif; jzpfonf/
,ckESpfrsm;wGifrl wrlxl;jcm;pGmjzifY a&muf&SdvmBuaom tqdyfoifUvlemrsm;rSm uav;i,frsm; jzpfBujyD; ¤if;wdkYrSm pdwfnpfí tqdyfoifYvlem jzpf&jcif;rsKd;r[kwfay/ uav;i,frsm; twwfprf;um pm;oHk;Buaom t&mrSm jcHpnf;&dk; Buufqlyif½dkif;[k vltrsm;odBuaom tyifrS&aom Buufqlaph jzpfonf/ Muufqludk jrefrmtbd"mef tusOf;csKyf twJG (1) pmrsufESm (60) wGif taphrS&aom qDudk 0rf;EIwfqD tjzpfoHk;&aom vufjcm;&GufBuD;&Sdonfh tyif [kazmfjycJhonf/
Muufql trsdK;aygif; 70 ausmf&Sdonfhteuf Muufqlyif½dkif;\_ rsKd;&if;trnfrSm Euphorbiaceae jzpfjyD; &ku©aA'trnfrSm jatropa curcus jzpfonf/
MuufqlyifESifh tyifxGuf ypönf;rsm;udk wcsKdYaom tmz&du taemufydkif; a'orsm;wGif 0rf;EIwfaq;? oHcsaq; tjzpfvnfaumif;? arG;zGm;& vG,fulap&ef vnf;aumif;? om;avsmapjcif; tvdkYiSm vnf;aumif;? a&zsif;pJGa&m*g? a*gufa&m*g? wcsKdYaom ta&jym; a&m*grsm;udk uko&ef vnf;aumif; oHk;pJGonfudk awGU&onf/
NcHpnf;½dk; Muufql½dkif; tapYudk Budwfí&aomqDudk v,f,mvkyfief;oHk; vufwGef; xGefpufESifh a&pkyfpuf? 'DZ,ftif*sifrsm;wGif jyefvnfjyKjyif&ef rvdkyJ wdkuf&dkufxnfhoGif; toHk;jyKedkifonf/
jrefrmEdkifiH tESHtjym;wGif Buufqlyif&dkif;rsm;udk vGefcJYaomwpfESpfcefYu pwif pdkufysdK;cJYaomfvnf; Buufqlyifonf6vrS 8 vwGif pwifí toD;poD;ekdifaomtyif jzpfav&m ,ckvdk aEG&moD ausmif;tm;&ufwGif &yfuGufwdkif;&Sd BuufqlyifwdkYü toD;rsm; a0a0qmqm jzpfaeBujcif; jzpfonf/
BuufqloD; wvHk;wGif tapY3apY yg0ifonf/ tapY wapYpDudk tcHGyg; teufa&mif? tndka&mif uav;rsm;jzifY tkyfxm;jyD; twGif;ü tjzLa&mif&SdonfY BuufqlapY twGif;om; &Sdonf/ ¤if;tjzLa&mif twGif;om;\_ t&omrSm Am'HapY? oD[dkapYwdkYuJYodkY uGßwfqwfí qdrfYaomaBumifY uav;rsm; prf;oyf pm;oHk;rdBujcif;? BudKufESpfoufí xyfrHpm;oHk;rdjcif; jzpfonf/
trSefppfppfwGif BuufqlapYwGifyg0ifaom "gwfwrsKd;onf qdkuf&mEdkuf tqdyfxuf tqaygif; 6000? cavmuf ajrGqdyfxuf tqaygif; 10000? ydkrdkjyif;xefjyD; obm0 twdkif; awGY&Sdedkifaom tqdyfwrsdK; jzpfonf/
BuufqlwGif t"dutm;jzifY tqdyfjzpfapaomt&m ESpfrsdK;yg0ifonf/ wrsdK;rSm &Dpif (ricin) jzpfjyD; aemufwrsdK;rSm RCA (Ricinus communis agglutinin) jzpfonf/ odkYaomf BuufqlapYudk pm;oHk;jcif;rS &&Sdaom tqdyfoifY vu©Pmrsm;onf &Dqif\_ tmedoifaBumifYom jzpfavonf/
xkdodkYjzpf&jcif;rSm RCA udk tleH&Hrsm;rS rpkyf,ledkifaomaBumifY jzpfonf/ tu,fírsm; RCA udk aoG;aBumxJodkY wdkuf½dkufxdk;oGif;rdygrl ¤if;onf aoG;eDOrsm;pGmudk aygufuJGapjcif;jzifh vlom;wdkYtm; tEÅ&m,fjyKEdkifayonf/ tqdyfoifYcH&aom uav;i,fonf BuufqlapY\_ tjyifvTm trJudkcGmjyD; twGif;om;udk 0g;pm;rdaomtcsdefü Ricin tmedoifrsm; pwifjzpfay:apNyD;? tqdkyg Ricin onf cE¨mudk,fwGif;&SdqJvf (cells) rsm;udk tqdyfoifh apaomaMumifhjzpfonf/
NcHpnf;½dk;Muufql½dkif;\_ taphjzpfaom MuufqlaphwGifyg0ifaom y&dkwdef; (protein) wrsKd;jzpfonfh umpif (carcin) onfvnf; &Dpif (Ricin) uJhodkYyif tpGrf; tmedoif&SdNyD; jyif;tm; tenf;i,f avsmhavonf/
Muufqlaphudk pm;oHk;rdaom olonf pm;jyD;em&D0ufrS 1 em&DtwGif; vnfacsmif; yljcif;? Adkuf&pfemjcif; rsm;cHpm;&NyD; xdkYaemufrl;jcif;? tefjcif;? 0rf;oGm;jcif;rsm; jzpfekdifygonf/ pm;oHk;aom yrmPrsm;onfESifh trSs aoG;0rf;oGm;jcif;? aoG;tefjcif;? a&"gwf tvGeftrif; qHk;½IH;jcif;\_ vu©Pmrsm;jzpfaom aoG;aygifusjcif;? ESvHk;ckefjrefjcif;? a&iwfjcif;? tmacgifajcmufjcif;? qD;enf;jcif; odkYr[kwf qD;rxGufedkifawmhjcif;? rsufwGif; csKdifh0ifjcif;? uav;i,frsm;wGif ta&jym;\_ elasticity avsmh&JoGm;jcif; wdkYudk awGY&wwfonf/
xdkYtjyifacGß;xGufjcif;? rsufqHusOf;jcif;? touf½Ijrefjcif;? Ekef;jcif;? MuGufwufjcif;ESifh yifrtm½HkaMum pepf tm;enf;jcif;wdkY jzpfwwfayonf/
umpif (carcin) onfvnf; cE¨mukd,fwGif;&Sd aoG;eDOrsm;udk aygufuJG apaomaMumifh rsufvHk;wGif; aoG;,dkpdrfhjcif;? aoG;0rf;oGm;jcif;? aoG;tefjcif;? tonf;ESihf ausmufuyfudk xdcdkufapjcif; wdkYudkyg jzpfapwwfonf/ NcHpnf;&dk; Muufqlyif&dkif;\_ yifpnf? t&Guf? toD;wdkYwGifvnf; tvm;wl tmedoifrsm; &SdaMumif; awGY&Sd&ao;onf/
tqdyfoifhaom olonf tcsdefwdktwGif; aumif;rGef vHkavmufaom jyKpkukorIrsm; &rnfqdkvSsif ESpfq,fhav;em&D ausmfvSsif touftEÅ&m,ftwGuf rpdk;&drf&aomfvnf; ? ESpfq,fav;em&D twGif;ürl tvGeftrif; 0rf;avSsmrIaMumifh a&"gwfqHk;½HI;um touftEÅ&m,f &SdEdkifayonf/
xdkYaMumifh tqdyfoifhaomoltm; eD;pyf&m aq;½kH? aq;cef;odkY tvsiftjrefydkY&ef vdktyfayonf/ aq;½Hkaq;cef;ESifh a0;vHvSaom ae&mrsm;wGifrl a&S;OD;olemjyKpkenf;rsm;taejzifh tpmtdrfwGif;rS Muufqlaphrsm;udk jyefxGufapjcif;tvdkYiSm tqdyfoifholtm; tefap&efjyKvkyfay;jcif;? a&"gwf rqHk;½IH;ap&ef "gwfqm;&nf wdkufjcif;rsm;udk jyKvkyfay;edkifygonf/
Muufqlaphyifonf wESpfwGif ESpfoD;oD;aom tyifjzpfjyD; toD;pGwfcsdefrSm arvESifh edk0ifbmvrsm; jzpfonf/ aEGoD;onf wyifvSsif EdkYqDAl; wpfAl;cefYom&&SdNyD; rdk;oD;onf wyifvSsif wpfjynfcefY xGuf&Sdedkifayonf/ ,ckESpf aEG&moD toD;oD;aom tcsdefwGifyif uav;i,frsm; tqdyfoifhaom yrmPrSm wdk;yGm;vsuff &SdaeaomaMumifh rdk;aESmif;umv toD;rsm;aom tcsdefrsm;twGuf pdk;&drfzG,f&myif jzpfonf/
xdkYaMumifh NcHpnf;½dk;Muufql;½dkif;yifonf vlom;wdkYtm; vGefpGm tusKd;&Sdaumif; &Sdrnfjzpfaomfvnf; tcefYroifhí pm;oHk;rdaomtcgü touftEÅ&m,f &SdedifaomaMumifh vltrsm; oGm;vmwwfaom ae&m? uav;oli,frsm; tvG,fwul a&mufEdkifaom ae&mrsm;wGif pdkufyskKd;jcif;rS a&SmifusOfjcif;? rdcifESifh uav;i,frsm;tm; NcHpnf;&dk; Muufqlyif½dkif;\_ qdk;usKd;ESifh &v'frsm;udk &Sif;jyjcif;tm;jzifh ¤if;rS jzpfay:wwfaom aemufqufwJG tqdyfoifhrI ab;'PfrS umuG,fEdkifrnf jzpfaMumif; today;tyfygonf/
rGef;oufyef (aq;- 1)
&efukefNrdKUwifrubJ jrefrmjynf wpfjynfvHk;u jynfolawGtm;vHk; txl;ojzifh uav;oli,fawG Muufqlyifu xGufvmwJh tqdyfeJUqufpyfNyD; usef;rma&; todynm &apcsifvdkU rrGef;oufyef\_ bavmhcfrS wqifh ul;,lazmfjyygw,f/ uav;awG&JU taumif;qHk; tusdK;pD;yGg;udk arQmfrSef;NyD; 'Dusef;rma&;todudk wwfEdkifoavmuf vufqifhurf; qufvuf jzefUa0ay;ygcifAsm vdkU wdkufwGef;EId;aqmfvdkufygw,f/
Posted by JulyDream at 10:46 AM 1 comment:
၀ိုင်အိုင်တီခေတ်က ကျောင်းသူများနဲ့ ကျောင်းသားများ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် နောင်ပြောင်ကျီစယ်တဲ့ ရယ်မောစရာ သံချပ်ကလေးတွေကို မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူ စာအုပ်ထဲက ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပျော်စရာတွေကို မကြုံလိုက်ကြတဲ့ လှိုင်သာယာကျောင်းမှ ၀ိုင်တီယူ မောင်နှမတွေအတွက် လွမ်းစရာ အမှတ်တရတစ်ခုပါ။ ဘ၀အမော စိတ်သောကတွေကို ရယ်မောခြင်းနဲ့ ပြေပျောက်ပါစေဗျာ။
(အနှစ်နှစ်အလလက ဆောက်နေပြီး မပြီးနိုင်သေးသော စက်မှုရေကူးကန်ကို)
ဟိုရှေ့က ကန်သာ ကန်သာ၊ စက်မှုကန်သာ
ကမ္ဘာမှာ စံတင်ထား၊ အံ့ဖွယ်တစ်ပါး၊
ဘိုးဘွားမှ မြေးမြစ်တီ ပြီးလုပါပြီ
ရာပြည့်မီ ဒီကန်ထဲ ကူးရမလွဲ။
ဘဲဥခြမ်း ဖြူတူတူ ... ဆားရေနဲ့ကူ၊
စက်မှုသူ အမူတုံး၊ ဘဲဥနဲ့ ဖုံး။
ဟိုမလေ ဒီမလေ ဟင်းချိုရေ ပန်းကန်ထဲ
ပိုက်ကျရေ ပူပူနွေး ဆားကလေးနဲ့တဲ့။
အရိရယ် အရွဲရယ် ခြေရိုးတဲ့ကွယ် ...
လည်ချောင်းသွယ်၊ တောင်ပန်ကား၊ စက်မှုကြက်သား။
ဟော ဒီမှာ ဟော ဒီမှာ အခေါက်မှာ အဆီထွေး
မွှေးညိုညို၊ ပင်ချင်းယှက်၊ ၀က်ဟင်းတဲ့လေး။
(လာသမျှလူနာကို ဆေးထိုးလွှတ်သော ကျောင်းမှ ဆရာဝန်ကို)
မမှုပါ အို ငါ့ရှင်၊ အားနည်းလာရင် ...
ဗီတာမင် အေ တူ ဇက်၊ ဆေးရုံကထွက်၊
၀မ်းကို့စ်တဲ့ လုံးတစ်ရာ၊ ဆေးလာထိုးပါ၊
ဒို့ ဒေါက်တာကိုလူဖြောင့် အပ်ကြီးနဲ့စောင့်။
တင်ပါးမှာ ဘယ်ညာယှက်၊ ထိုင်ရခက်ခက်။
နှာခေါင်းပိတ် မခံနိုင်၊ ငုတ်တုတ်ရင်ဆိုင်၊
ရနံ့ ကြိုင် ထိုင်မရ၊ ဒို့ အိမ်သာဗျ။
ကျောင်းသား။ တံခါးပိတ်လို့ ၊ ဖျာလိပ်ကာ ... နတ်မေးတာဟာ သူတို့အကျင့်။
ကျောင်းသူ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကျိတ်လို့သာ ... ဂဏန်းတွက်တာ သူတို့အကျင့်။
ကျောင်းသား။ ငါးပိကြော် ဆယ်ပြားဖိုး၊ ဆယ်ယောက်တိုးတာ ကြည့်မကောင်းဘူး။
ကျောင်းသူ။ ထမင်းစားခန်း ယောင်မှားဝင်၊ ငွေမသွင်းရင် ပြန်ထွက်ပြန်ထွက်။
ကျောင်းသား။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဆွေကလျာ ... ဒို့တတွေဟာ မောင်နှမတွေပဲ။
ကျောင်းသူ။ မောင်နှမတွေမို့၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ... ခင်မင်တာတွေ၊ ပြောလို့မဆုံး။
၀ိုင်တီယူနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး နေးတစ်မြန်မာဖိုရမ်က ၀ိုင်တီယူတော့ပစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။ ကျောင်းကို လွမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီပို့စ်ကို ဒီဘလော့ခ်မှာ ထပ်တင်ထားပါရစေ။
khwunn wrote ...
MTU ကနေ BE ဘီအီးဘွဲ့ရခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ခေတ်စံနစ်နဲ့ လူဖြစ်နောက်ကျခဲ့တဲ့ အပြစ် တွေကြောင့် သူတို့မုန်းကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကျနော်လဲ တစ်ယောက်အပါအ၀င် ဖြစ်သွားရတာပေါ့။
ကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာ အင်ဂျင်နီယာ အစ်ကိုအစ်မတွေပဲလို့ သဘောထားချင်ပေမယ့်... ပုံမှန်တန်းက အစ်ကိုအစ်မတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကျနော်တို့ကို မုန်းနေလိမ့်မယ်လို့ပဲ တွေးမိခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစ်ကိုအစ်မတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်း ကျနော်တို့ နားလည်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို နားလည်ပေးတယ်ဆိုလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တွေလည်း အဲဒီအခွင့်အရေးတွေအတွက် အခု ဘယ်လိုပေးဆပ်နေရသလဲ ဆိုတာ မြင်ကြမှာပါ။ ကျနော်တို့တွေလဲ မပျော်ကြပါဘူး။ ကျနော်တို့နေရာမှာ အစ်ကိုတို့တွေဆိုလည်း ပျော်ကြမှာ မထင်ပါဘူး။ ဘာပဲ ပြောပြော အခုလို နားလည်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
သူတို့ဆိုတာက ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာက ကျွန်တော် ကွဲကွဲပြားပြား မသိလိုက်ရသေးပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ မုန်းတယ်လို့..... ဆိုကြတဲ့ စံပြဆိုတာတွေက ကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ဦးချင်းအပေါ်မှာ ထားရှိနေတဲ့ အမုန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခေတ်စနစ်ရဲ့ သားကောင်ဘ၀ကို ရောက်နေရတဲ့သူတွေကို နားလည်ခံစားမိဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ကြိုးစားနေဆဲပါ။
ကျွန်တော်တို့မှာ အရာရာမှာ ကွာခြားလှတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ အခြေအနေတွေ၊ သင်ခန်းစာတွေကို အနောက်ကနေ သရဲသဘက်လိုက်လာသလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ စာသင်ချိန် တိုတောင်းမှုတွေ၊ ကြိုးစားရဲ့သားနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ရုတ်တရက် ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေ စတာတွေကြောင့် စာမေးပွဲမှာ အခန့်မသင့်လို့ ခြေချော်လက်ချော် ကျသွားခဲ့ရင်တောင် နောက်တက်စရာ အတန်းမရှိလို့ ကျောင်းထွက်ရမယ့်အခြေအနေတွေ၊ ကလေးဘ၀ ငယ်အိမ်မက်တွေ ကတည်းက မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးတွေမှာ မတက်ရဘဲ နယ်ခြား တဖက်ကမ်းမှာ စည်းတဖက်ခြားနေသလို မြင်သာမြင်မကြင်ရတဲ့ မတူမတန် ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀တွေ၊ ကျောင်းပြီးသွားရင်လည်း ရှေ့ဆက်လှမ်းရမယ့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းကြီးက မှုန်ရီဝေ ၀ိုးတ၀ါး ကြယ်တွေ မစုံတဲ့ ညလိုဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ ...
ခြုံငုံကြည့်လိုက်ပါ။ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာ ....
အဲဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ခံစားခဲ့ရတာပါ။
ဒီကျောင်းကြီးကို တက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအထိ ဘယ်လောက်အထိ ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေ ...
ဘယ်လောက် အချိန်ကုန် အပင်ပန်းခံခဲ့ရတာတွေ ...
ဆေးကျောင်းဝင်ခဲ့သူတွေတောင် ဒီကျောင်းပဲတတ်ချင်လို့ ၀ိုင်တီယူပဲ လျှောက်ခဲ့ရတာတွေ ...
ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ တူသလား... တန်သလား... ဆိုတာတွေကို ချိန်ခွင်ပေါ်တင် ချိန်ကြည့်လိုက်ရင် ချိန်ခွင်လျှာကြီး ဘယ်လို ထွက်နေမလဲဆိုတာကို တွေးမိကောင်းပါရဲ့။
ကျွန်တော် အားလုံးကို တန်းတူ ဆက်ဆံပါတယ်။ မနှိမ့်ချပါဘူး။ မရိုင်းပြဘူး။ အခု ကျွန်တော်ရေးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ကလည်း ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းရဲ့ အမြင် သဘောထားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်တီယူ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အတော်များများရဲ့ ရင်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခံစားချက် ဝေဒနာ ကြာနီပွင့်တွေပါ။ နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေဗျာ။
အခု ကျွန်တော် မမုန်းတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးပါပဲ khwunn.
အမုန်းတွေ၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုတွေ အကြောင်းကတော့ ...
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေပါ။
အားလုံးက မြေဇာပင်လေးတွေပါပဲ။ အိမ်မက်ကိုယ်စီ ရှိကြတဲ့ တက်ကြွတဲ့ လူငယ်ဘ၀မှာ အမုန်းပင် ပျိုးခံလိုက်ရသလို ဖြစ်သွားကြတာပါ။ အရာရာမှာ အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကို လိုက်ဖို့ကတော့ လွယ်မယောင်နဲ့ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်ပါတယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့သူတွေကို တွေ့ရသလို ငါနဲ့ငါသာ နှိုင်းစရာဆိုပြီး ပညာမာနတံခွန်တွေ ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွား လွင့်နေတဲ့သူတွေလဲ ရှိမှာပါ။ အခွင့်အရေးဆိုတာက တာဝန်ရှိမှုဆိုတာနဲ့ တွဲပြီးပါလာစမြဲပါ။ အဲဒီအခွင့်အရေးကို ယူလိုက်ရလိုက်တဲ့ သူတွေအဖို့ နောက်ဆက်တွဲ တာဝန်တွေဆိုတာ ပါလာရစမြဲပါပဲ။ အခွင့်အရေး မရလိုက်တဲ့သူတွေကလည်း အခွင့်အရေးကို တာဝန်နဲ့ အတူတကွ ယူချင်ကြမှာပါ။ ရလိုက်တဲ့သူတွေကလည်း တခါတလေကျတော့ အဲဒီတာဝန်တွေကို ငြိုငြင်မိလာပါတယ်။ တော်ရာမှာ မနေ၊ ပျော်ရာမှာ နေဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ အခုတော့ ပျော်ရာမှာမနေ၊ တော်ရာမှ နေနေကြရတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အစိုးမရတဲ့ လူသားတွေပါပဲ။ အကောင်းဆုံးကိုတော့ ကြိုးစားကြပါဗျာ။ လှည့်ကြည့်စရာတွေ ငဲ့ကွက်စရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Posted by JulyDream at 11:42 AM2comments:
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသားများဟာ အဓိကကျသော ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်သူများဖြစ်ကြပြီး အထူးသဖြင့် မျိုးဆက်ပွါး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများတွင်လည်း ၄င်းတို့၏ကဏ္ဍမှာ အရေးပါလှပါတယ်။ အမျိုးသားများတွင်လည်း မှန်ကန်သော အသိရှိပြီး အောက်ပါအချက်များကို ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မိသားစုများနှင့်တကွ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို တိုးတက်သာယာစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်တိုင် မိမိဇနီးလောင်းနဲ့ အနာဂတ် ရင်သွေးငယ်တို့ ကာလသားရောဂါများမှ ကင်းဝေးရန် အပျော်အပါး လိုက်စားခြင်းကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။ မလိုလားသော ကိုယ်ဝန်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် သမီးရည်းစားဘ၀မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အမျိုးသမီးများအား ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုကျင့်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
မိသားစု စားဝတ်နေရေး၊ လူနေမှုဘ၀ ပြည့်စုံရေး အတွက် တာဝန်ယူရပါမယ်။ ခင်ပွန်း၊ ဇနီး နှစ်ဦးစလုံး ကလေးဘယ်အချိန်ယူမယ်၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ယူမယ် ဘယ်နှစ်နှစ်ခြား ယူမယ် ဆိုတာတွေကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။ မိမိဇနီးအပေါ်မှာ သစ္စာရှိပြီး အိမ်ထောင်ဖက် မဟုတ်သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ မိမိဇနီးအား ကိုယ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်အထက် ဆက်ဆံခြင်းများမှ ရှောင်ရှားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသုံးနိုင်ရန်နဲ့ လုံလောက်သော အနားယူမှု ရရှိရန်အတွက် ပံ့ပိုးစီစဉ်ပေးရပါမယ်။ ကျွမ်းကျင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထံမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု အနည်းဆုံး ၄ကြိမ် ခံယူနိုင်ဖို့အတွက် ပံ့ပိုးပေးရပါမယ်။ မွေးဖွါးရန်နဲ့ အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ငွေရေးကြေးရေး၊ သွားရေးလာရေးတို့ အတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ထားရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အန္တရာယ် လက္ခဏာများကို သိရှိပြီး၊ အချိန်မီ ဆေးရုံသို့ ပို့နိုင်ရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သတိပြုရမည့် အန္တရာယ်လက္ခဏာများမှာ -
ခြေသလုံးနဲ့ ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း သွေးကြောများ ဖောင်းကြွခြင်း
ကျွမ်းကျင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့်သာ မီးဖွါးနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးရပါမယ်။ (မိခင်နဲ့ ကလေးတို့ အသက်ရှင်ရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းနှင့် မွေးခြင်း၊ မမွေးခြင်းပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။) မီးဖွါးစဉ် အန္တရာယ်လက္ခဏာများကို သိရှိပြီး အချိန်မီင်္ ဆေးရုံသို့ ပို့နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးရပါမယ်။
မီးဖွါးစဉ် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အန္တရာယ်လက္ခဏာများမှာ -
ဗိုက်စနာလာချိန်မှစပြီး ၁၂ နာရီကျော်တဲ့အထိ ကလေးမမွေးနိုင်ခြင်း
မီးဖွါးချိန်မှာ သွေးဆင်းများခြင်း၊ သွေးဆင်းမရပ်ခြင်း
မိခင်အသားအရေ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်လာခြင်း
မီးဖွါးပြီး တစ်နာရီအတွင်း အချင်းမကျခြင်း
မွေးဖွါးလာတဲ့ကလေး အသက်ရှုမမှန်ခြင်း၊ ပေါင်မပြည့် လမစေ့ခြင်း
မီးဖွါးပြီးစောင့်ရှောက်မှုကို ကျွမ်းကျင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆီမှ အနည်းဆုံး ၆ ကြိမ် ခံယူနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးရပါမယ်။ မီးတွင်းအချိန် အန္တရာယ်လက္ခဏာများ သိရှိထားပြီး၊ အချိန်မီဆေးရုံသို့ ပို့နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရပါမယ်။
မီးတွင်းအချိန် အန္တရာယ်လက္ခဏာများမှာ -
အိမ်မှုကိစ္စများကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်မှ လိုအပ်သလို ကူညီပံ့ပိုးပေးရပါမယ်။ မွေးစကလေးအား အသက် ၆လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း အောင်မြင်စွာ တိုက်ကျွေးနိုင်ဖို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ခြားဖို့အတွက် သားဆက်ခြားနည်းလမ်း သုံးစွဲရန် ဇနီးသည်နဲ့အတူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆီ လိုက်ပါဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ တစ်နှစ်အောက် ကလေး ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အ၀ ထိုးနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးရပါမယ်။
တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိ အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိလို့ ဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 1:28 PM2comments:
Today, around 1:30 somebody appeared to beafemale jump track in Clementi MRT Station. She was appearing to be dead after SCDF (Singapore Civil Defense Force) people try to get the body out under the train.
I hope the train services will be resuming later. The on-site seers accounts the jumper is doing suicide but the source of this news is not confirmed.
Warning : Following2photos contain body of victim.
Posted by JulyDream at 2:46 PM No comments:
Posted by JulyDream at 9:33 PM No comments:
ကွန်ဒုံးအစွပ်များက အေ့စ်ရောဂါကာကွယ်ရေး တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းအနေနဲ့ ၂၅ နှစ်ကြာမျှ ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ နောက်နှစ်များ မကြာမီ အဏုဇီဝပိုးများကို သတ်နိုင်မယ့် ဂျယ်လီများ ပေါ်ပေါက် လာတော့မှာပါ။ ကာမစပ်ယှက်ရာတွင် အေ့စ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ပိတ်ဆို့တားဆီးနိုင်တဲ့ အဲဒီဂျယ်လ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကို အိမ်မက်တစ်ခုပမာ မျှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့ သုတေသနပြုလုပ် နေကြသူများ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အေ့စ်ရောဂါ အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ တောင်အာဖရိကမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ရောဂါကူးစက်ခံ ရသူတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက လင်ယောကျာင်္း သို့မဟုတ် ရည်းစားတွေရဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ ကွန်ဒုံးမပါဘဲ အနိုင်အထက် စီးနင်းဆက်ဆံခံရခြင်းတွေကြောင့် ကူးစက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဂျယ်လ်မျိုးသာ ပေါ်ပေါက်လာရင် အဲဒီလိုမျိုး အေ့စ်ရောဂါဆိုးကို ပိပိရိရိ ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
ယောကျာင်္းတွေကလည်း ယောကျာင်္းတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာင်္းတွေက သူတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ကွန်ဒုံးကို မသုံးချင်ကြပါဘူး။ အလွှာတစ်ခုခြားနေတာကို ကမ္ဘာတစ်ခု ခြားသလိုလိုပဲ ပြောကြ ဆိုကြတတ်ပါသေးတယ်။ အကယ်လို့များ ကွန်ဒုံးသုံးဖြစ်ခဲ့ရင် အေ့စ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့ပွါးမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်မှာပါ။
၁၉၉၇ မှာ အဏုဇီဝ ပိုးသတ်ဆေး ရှာဖွေဖို့ အထောက်အပံရငွေက ဒေါ်လာ ၂၈ သန်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စမ်းသပ်မှုဖြစ်တဲ့ သုတ်သတ်ဆေးမှ ထုတ်ယူသောဆေးက မအောင်မြင်မှုများနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီဆေးကို စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှာ အမျိုးသမီးအင်္ဂါ အတွင်းနံရံမှာ အနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အနာတွေရဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုအတွင်းသို့ ရောဂါပိုးက အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရပါတယ်။
အခုတော့ အခြေအနေတွေက ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ၂၀၀၅ ခုမှာ ထောက်ပံ့ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၁၆၃ သန်းဖြစ်လာပါတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်ဖောင်ဒေးရှင်းက အခုဂျယ်လ် ထုတ်လုပ်ရေး ပရဟိတလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ပေးထားပြီး များစွာထောက်ပံ့ ကူညီပေးနေပါတယ်။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလမှာ စမ်းသပ်မှုများ ပြီးစီးမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေ အောင်မြင်ခဲ့ရင် ၂၀၀၉ ခုမှာ အဲဒီဂျယ်လ်ကို သုံးနိုင်မယ်လို့ သုတေသီတွေက ခန့်မှန်း ပြောကြားထားပါတယ်။
Posted by JulyDream at 9:17 AM No comments:
ရင်ထဲမှာ လှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်လေး တစ်ခုပါ။ MediaCorp Channel5က3Wishes ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။ ယူအက်စ်တစ်ဝှမ်းက ကလေးတွေက သူတို့ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေကို အဲဒီအစီအစဉ်ဆီကို စာရေးသား ပေးပို့ရပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ကာလရောက်တဲ့ အခါကျတော့ သူတို့တွေက ကလေးတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါတယ်။ ကလေးတွေရော စီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေရော ရပ်ရွာနေ လူထုတွေရော အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြည်နူး မျက်ရည်လည်ရစေတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။
ကယ်လ်ဖိုးနီးယားက ၈ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး ...
သူက ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်လေးပေါ့။
သူရဲ့ အချိန်အများစုက အဲဒီကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကြားမှာ ပြတိုက်တွေထဲမှာ စိတ်ကူးတွေယဉ်လို့ပေ့ါ။ သူက ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေ တူးဖော်တဲ့ တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကို သွားရောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် တူးဖော် ရှာဖွေလိုနေတဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေတယ်။ အဲဒီဆန္ဒကို အဖွဲ့ကို စာရေးပြီး ပြောပြထားတော့ အဖွဲ့က အဲဒီကောင်လေးကို ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း တူးဖော်တဲ့နေရာကို စရိတ်အကုန်ကျခံ ခေါ်ဆောင်ပေးပြီး တူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ ကောင်လေး အပြန်မှာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကိုလည်း လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်သေးတယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုက ကောင်မလေး တစ်ယောက် ...
သူတို့မိသားစုက မောင်နှမတွေများတယ်။ မုန်တိုင်းမှာ သူတို့ အရုပ်တွေ အကုန်ပါသွားတယ်။ အဲဒါကို မောင်နှမတွေက နှမြောတမ်းတနေမိတယ်။ သူတို့ ကစားစရာ အရုပ်ကလေးတွေကို ပြန်လိုချင်တဲ့အကြောင်း စာရေးလိုက်တယ်။ အဖွဲ့က ကုန်တိုက်တစ်ခုရဲ့ ကစားစရာ အရုပ်တန်းဘက်ကို ခေါ်သွားလိုက်တယ်။ မောင်နှမ ၅ ယောက်စလုံးကို ခေါ်သွားတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း ကြိုဆိုနေကြတယ်။ လှည်းတွေနဲ့ ကြိုက်တဲ့အရုပ် ကစားစရာ စားစရာ ကြိုက်သလောက် ယူခွင့်ပေးထားတယ်။ ကလေးတွေလည်း တပျော်တပါးကြီး ယူကြနေကြတာ တကယ်ပီတိဖြစ်စရာပါ။
လေယာဉ်မှုးဖြစ်ချင်တဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် ...
သူဆန္ဒကို စာရေးလိုက်တော့ အဖွဲ့က စစ်အခြေစိုက် လေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုကို ခေါ်သွားတယ်။ လေယာဉ်မောင်း ၀တ်စုံတွေ လေထီးတွေကို သူ့အရွယ်နဲ့ လိုက်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။ တိုက်လေယာဉ်ကို ပိုင်းလော့ခ်နေရာကနေ မောင်းရတယ်။ အနောက်က အကူတစ်ယောက် လိုက်ပေးတယ်။ ကောင်းကင်ယံမှာ စက်သေနတ်ပစ်တာမျိုးတွေကိုလည်း အစမ်းလေ့ကျင့်သေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လေသဘောင်္ကြီးကို ပိုင်းလော့ခ်နေရာကနေ မောင်းရသေးတယ်။ သူ့ဆန္ဒတွေ သူ့အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာတာပေါ့။
ကယ်လ်ဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းက ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက် ...
သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ သူမထက် သုံးနှစ်ကြီးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ကင်ဆာရောဂါသည်လေးက အရင်က ရွှေအိုရောင်ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ အရမ်းကိုလှတဲ့ ကလေးမလေးပါ။ အခုတော့ ကတုံးတုံးထားရပြီး လူလဲပိန်ညှော်နေပါပြီ။ ကလေးမလေးက ခရစ်စမတ်ကို နှင်းတွေတဖွဲဖွဲ ကျနေပြီး နှင်းလွှာရေခဲထုကြီးပေါ်မှာ ကျင်းပချင်တဲ့စိတ်လေး ရှိနေတယ်။ ကယ်လ်ဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းက နှင်းထုကြီးကြီး ဖြစ်လောက်အောင် နှင်းမကျဘူး။ အဲဒီလို နှင်းတွေဝေနေတဲ့ ခရစ်စမတ် ကာလလေးကို သူ မသေခင်လေးမှာ ကြုံသွားချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒါကို သူ့သူငယ်ချင်းမလေးက သူ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင် နေတော့ အဖွဲ့ကို စာရေးပြီး သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို ပြောပြတာပေါ့။ အဖွဲ့က ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင် ၂ ည လောက်ကတည်းက လိုအပ်တဲ့ အပင်တွေ၊ အရုပ်တွေ၊ အလှဆင်မီးတွေ အကုန်အစုံဝယ်ပြီး ပြင်ဆင်ပေး ပါတယ်။ အိမ်ခေါင်မိုးတွေကို နှင်းတွေ ဖုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ရေမြှုပ်ဖော့တွေ အပြည့်ကပ်ပါတယ်။ ခရစ်စမတ် သစ်ပင်တွေစိုက်၊ ရေခဲပြင် လျှောစီးဖို့အတွက် ကုန်းကမူ အတုလေးတွေ၊ တိုက်မိရင် ပြုတ်ကျရင် မနာရအောင် ကောက်ရိုးထုံးတွေကပ် ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်နေကြတာများ ပျော်စရာကြီးပါ။ ခရစ်စမတ် ညနေပိုင်းလောက်မှာ ရေခဲတွေ တင်လာတဲ့ ကွန်တိန်နာကားကြီးဝင်လာပါတယ်။ ရေခဲအမှုန့် ချေတဲ့စက်နဲ့ ရေခဲတွေကို စက်ထဲခွဲထည့်ပြီး အိမ်နဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ဖြန်းပတ်ပေးတာနဲ့ အဲဒီနားတစ်ဝိုက် နှင်းထုရေခဲပြင်ကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ စက်နဲ့ ဖြန်းပေးထားတော့ နှင်းတွေလည်း တဖွဲဖွဲ ဆက်ကျနေဆဲပေါ့။ ရောဂါသည်ကောင်မလေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကို အဲဒီတော့မှ ခေါ်လာ ကောင်မလေးတွေ အရမ်းအံသြ ၀မ်းသာကြတာပေါ့နော်။ လာကြည့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိဘတွေလည်း မျက်ရည်လည်ရွဲ ငိုကြတော့တာပါပဲ။ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ မျက်ရည်တွေပေါ့နော်။ ခရစ်စမတ်အပင်တွေကို မီးထွန်းဖို့ ကောင်မလေးက ခလုတ်နှိပ်ပေးရပါတယ်။ ပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး လင်းထင်းသွားပြီး အရောင်တွေစုံတဲ့ ငွေနှင်းမှုံကြားမှာ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုလေးပါပဲ။ အစီအစဉ်ကို ကြည့်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း မျက်ရည်လည်စေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာရော ကလေးတွေ အတွက် ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်ကြမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးအရွယ်မှာ အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရဲ့လား။ မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီတော့ရော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်က ကလေးတွေကို အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ကြဘူးလား။ ကိုယ်တွေ့ရဲ့ ကလေးဘ၀ အိမ်မက်တွေ ဖြစ်မလာခဲ့ပေမယ့်လေး သူတို့လေးတွေရဲ့ ကလေးဘ၀ အိမ်မက်တွေကို တကယ် ဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက သူတို့တွေလောက် လုပ်မပေးနိုင်ရင်တောင် မြန်မာပြည်အတွင်း အလည်အပတ် ခရီးတွေလောက်တော့ စီစဉ်ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ကလေးတွေကို မလုပ်ပေးနိုင်ရင်တောင် နှစ်အလိုက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် သတ်မှတ်ပြီး ဆယ်ယောက် ဆယ့်ငါးယောက်လောကို သူ့တို့ ရောက်ချင် သွားချင်တဲ့ နေရာတွေကို လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နိုင်သလောက်လေးက စကြရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
အခုချိန်မှာ အခြေအနေမပေးလို့ မလုပ်ဖြစ်ရင်တောင်... တစ်ချိန်ချိန်ကြရင် စိတ်ကူးအိမ်မက်ချိုတွေ တကယ်ဖြစ်လာအောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် စိတ်တူကိုယ်တူ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့ ရင်ခုန်မျှော်လင့်ရင်း ...
Posted by JulyDream at 2:43 PM5comments:
အခုဇူလိုင်လ အရှေ့ပိုင်းမှာ မွေးတဲ့သူတွေက ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကရကဋ်ဖွားတွေအကြောင်း နည်းနည်းရေးပေးအုံးမယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်။ ဖတ်ပြီးမှ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိရင် ဟုတ်မဟုတ် အကြောင်းပြန်ပေါ့။
ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေက တနလာင်္ဂြိုဟ် (စန်း) စိုးမိုးတဲ့ကာလမှာ မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေပါ။ အဲဒါကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများတယ် ကြွယ်ဝတယ် ကျော်ကြားတယ်။ မွေးရာပါ ကုသိုလ်ထူးလေးပေါ့။ ပီယလည်း ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။ ဒဏ္ဍာရီမှာတော့ လနတ်သမီး ဒိုင်နာ စိုးမိုးတဲ့ဂြိုဟ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒိုင်နာဆိုတာ ဇုနတ်မင်းကြီးနဲ့ လာတိုနာဆိုတဲ့ ပေါင်းဖက်ရာမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ နတ်မိမယ်လေးပေါ့။ သူ့အကိုကတော့ နေနတ်သား အပိုလိုပါ။
ကရကဋ်တွေက ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး ကောင်းမွန်ကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးလို့တောင် တချို့က ပြောကြသေးတယ်။ တခြားရာသီခွင်တွေ မနာလို မဖြစ်ကြနဲ့နော်။ ပတ်သတ်နေတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာ သံယောဇဉ် အလွန်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ စာနာတတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်။ စေ့စပ်သေချာလေ့ရှိတယ်။ နက်နက်နဲနဲ တွေးခေါ်စူးစမ်းလေ့ရှိတယ်။ အစွဲအလန်းလည်း ကြီးတယ်။ နှလုံးသားလေးက ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တယ်။ ပင်ကိုယ်ကံအရ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းခြင်း သိပ်မရှိလှဘူး။ အသည်းခွဲ ခံရလေ့ရှိတယ်။ ချစ်သူအပေါ် ချစ်လွန်းလို့ သ၀န်တိုတတ်တာလည်း ကရကဋ်တွေပဲ။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Cancer ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေဟာ အများနဲ့မတူတဲ့ အမြင်တွေ အမူအကျင့်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
သူများတွေက ဒီအသားလေး စားလို့ ကောင်းတယ် ပြောပေမယ့် ကရကဋ်တွေအနေနဲ့ ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာပါ။ သူများတွေက ဒီအချိုရည်လေး သောက်လို့ ကောင်းတယ် ပြောပေမယ့် ကရကဋ်တွေအနေနဲ့ ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာပါ။
သူများတွေ စုဆောင်းနေချိန်မှာ ကရကဋ်တွေ လက်ဖွာနေတတ်ကြပါတယ်။
သူများတွေ သုံးနေဖြုန်းနေချိန်မှာ ကရကဋ်တွေ ခြစ်ကုတ်စုနေတတ်ပြန်ရော။
သူများတွေ ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ကရကဋ်တွေ မှိုင်နေတတ် တွေးတောနေတတ်ပါတယ်။
သူများတွေ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကရကဋ်တွေ အချိန်ယူ အရှိန်ယူနေဆဲပါ။
သူများတွေ နားနေချိန်မှာ ကရကဋ်တွေ တကုပ်ကုပ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပြန်ရော။
သူများတွေ အိပ်ရာထဲကွေးနေချိန်မှာ ကရကဋ်တွေ နောက်တစ်နေ့အတွက် အဆင်သင့် နိုးထနေပါပြီ။
အသေးအဖွဲလေးတွေကိုလည်း အကျယ်ချဲ့တတ်တာလည်း ကရကဋ်တွေပါပဲ။
သူများတွေ ထူးခြားဆန်းပြား ကြီးကျယ်လွန်းတဲ့အရာတွေကလည်း ကရကဋ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သာမာန် အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်ပြန်ရော။
သူများတွေးသလို လိုက်မတွေးတတ်တာလဲ ကရကဋ်တွေရဲ့ သီးသန့်ပုံစံလေးပါပဲ။
ခေါင်းမာတဲ့နေရာမှာလည်း ကရကဋ်တွေက ပြိုင်စံရှားပါ။ ဘူးဆို ဖရုံမသီးတော့တာပါပဲ။
ကရကဋ်တွေအများစုဟာ သူ့နယ်ပယ်အတွင်းမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ မနာလိုတဲ့သူ ဂုန်းတိုက်တဲ့သူတွေလည်း များတယ်။ အဲဒီလို လေနီကြမ်းတွေထဲမှာ၊ မုန်တိုင်းတွေထဲမှာ ကြံကြံခံနေရင်း အလိုလို ထင်ရှား ကျော်ကြားလာတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ပေးဆပ်မယ့်နှလုံးသားနဲ့ ရင်နှင့်အောင်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ခံစားချက် အသဲနုနယ်သူတွေ ဖြစ်နေတတ်တာလဲ ကရကဋ်တွေပဲလေ။ အလွယ်တကူ မချစ်တတ်ဘူး။ အလွယ်တကူ မမုန်းတတ်ဘူး။
ဒါကြောင့် အများနဲ့မတူ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်ဖြစ်ပြီး လူ့ဂွစာအဖြစ် တစ်ခါတစ်လေ အထင်လွဲအမြင်လွဲ ခံရတတ်ပြန်ပါတယ်။
ကဲ ဟုတ်ပါသလား မှန်ပါသလား ကရကဋ်တွေရေ ...
Posted by JulyDream at 4:24 AM3comments:
မိုးတွင်းမှာ မွေးလာတဲ့ ကျွန်တော်... မိုးကို အလွန်ချစ်ပါတယ်။
အများတကာတွေက မိုးရေထဲမှာ သွားရလာရ အဆင်မပြေလို့ မကြိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော် မိုးကို ချစ်ပါတယ်။ မိုးဖွဲဖွဲလေး ရွာနေရင် အဲဒီမိုးဖွဲလေးတွေ မျက်နှာကို လာထိတဲ့ အရသာကို မြတ်နိုးပါတယ်။ မိုးဖွဲဖွဲလေးရွာနေချိန် သူများတကာတွေ ထီးဖွင့်ဆောင်းနေချိန်မှာ ကျွန်တော် မိုးဖွဲတွေကြားမှာ ပျော်နေမိ ပါတယ်။ မိုးစက်လေးတွေ မျက်နှာပေါ်လာထိတဲ့ အေးကနဲ အေးကနဲ အရသာကို စွဲမက်နေမိတယ်။
မိုးသည်းသည်းမဲမဲ ရွာတဲ့အချိန်ဆို ကျွန်တော် အလွန်ပျော်ပါတယ်။ မိုးသီးမိုးပေါက်တွေ တဖြောင်းဖြောင်း ကျနေတဲ့အောက်မှာ တကိုယ်လုံးစိုရွှဲသွားအောင် လမ်းလျှောက်တတ်ပါတယ်။ တခါတလေ မိုးသည်းထဲမှာ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်စီးရင်း ကလေးမဟုတ် လူကြီးမကျပုံစံနဲ့ မိုးရေ ချိုးပါတယ်။ တခါတလေ ကမ်းနားမြစ်ဆိပ်က သစ်ပုံဆိပ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ သစ်လုံးပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း မြစ်ပြင်ကျယ်ပေါ်ကို အလုအယက် ခုန်ဆင်းနေတဲ့ မိုးစက်တွေကို အလွမ်းဓါတ်ခံလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ခံစားကြည်နူးဖူးတယ်။
အိမ်ထဲမှာနေရင်း မိုးသည်းသည်းရွာနေရင် သီချင်းတွေ နားထောင်ပြီး အတိတ်ကို ပြန်လွမ်းဆွေးတတ်တယ်။
အိမ်ခေါင်မိုးတွေပေါ်က တဖြောက်ဖြောက် ကျနေတဲ့ မိုးစက်သံတွေကို နားထောင်ရင် ဘယ်သူကို လွမ်းလို့ လွမ်းမှန်းမသိအောင် ခံစားဖြစ်ဘူးတယ်။
မိုးသည်းထဲမှာ ဘက်စ်ကား ခိုစီးရတာကို သဘောကျတယ်။ မိုးရေတွေကြီး လမ်းတွေရေမြှုပ် ဖြစ်နေချိန် ဘက်စ်ကားစီးနေတာလား လှေစီးနေတာလား ဆိုတာမျိုးကို သဘောကျမိတယ်။ မိုးသည်းသည်းမှာ ဘက်စ်ကားစီးရင်း တစ်ယောက်သောသူကို မထင်မှတ်ဘဲ ကြုံဆုံဘူးတယ်။
မိုးရေထဲမှာ ထီးမဆောင်းဘဲနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း သွားဖူးတယ်။ မိုးသည်းထဲမှာ လမ်းဘေးက ဓါတ်တိုင်ကို ချည်ထားတဲ့ သံကြိုးကို မမြင်ဘဲ မျက်နှာနဲ့ တည့်တည့်ဝင်ဆောင့်ပြီး ဖင်ထိုင်ကျဘူးတယ်။ မိုးသည်းထဲမှာ တစ်ယောက်သောသူရဲ့ ရီမောသံကို မိုးသံလေးနဲ့အတူ ကြည်ကြည်နူးနူး ကြားဖူးခဲ့တယ်။ နဖူးအလယ်ကနေ နှာခေါင်းတလျှောက် မေးစေ့အထိ မျက်နှာမှာ အနီ အစင်းကြောင်းကြီးဖြစ်ဘူးတယ်။ မိုးသည်းသည်းထဲမှာ ကိုယ်စီ ထီးမဆောင်းကြဘဲ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမ အလယ်မှာ တစ်ယောက်သောသူကို လက်ဆောင် ပေးဘူးတယ်။ နှောင်းအတိတ်က အောက်မေ့စရာ ဖြစ်ရပ်အတော်များများက မိုးသည်းထဲမှာပါ။
ထီးကို ဆောင်သွားလေ့ သိပ်မရှိတဲ့ ကျွန်တော်ကို သူငယ်ချင်းတွေက အံသြပါတယ်။ မိုးရွာပြီး မိုးစဲတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လူရှေ့သူရှေ့ ထွက်စရာ အလုပ်တွေ မရှိရင် ကျွန်တော် ထီးပါရင်တောင် ထီးမဆောင်းဘဲ မိုးရေထဲမှာ လျှောက်နေလေ့ရှိပါတယ်။
Posted by JulyDream at 11:13 PM2comments:
Posted by JulyDream at 9:58 AM No comments:
နေ့တွေ ညပြောင်း..... ညတွေ နေ့ပြောင်းနဲ့ တစ်ညကုန်ပြီး တစ်မိုးသောက်လာပြန်ပြီ။ မိုးလင်းလာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ၀မ်းကဟာ ဗိုက်ကဆာလာတာပေ့ါ။ ဒီမှာ မနက်စာဆိုတာကြီးကို စားရတာ ငြီးငွေ့လာပြီ။ ဒါတောင် ရောက်တာ မကြာသေးဘူးနော်။ ဒီကို ရောက်နှင့်နေတာ ကြာလှနေပြီဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ၀ိုင်းပြီး မေတ္တာပို့ကြမှာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မှာဆို မနက်မိုးသောက် အလင်းရောက်လို့ ဘာစားချင်သလဲ...... ကြိုက်တာစားလို့ရအောင် အစုံအလင်ရှိနေတယ်။ အိမ်မျက်စောင်းထိုးမှာ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့အသုပ်စုံ ရောင်းတဲ့ဆိုင် ရှိတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ မုန့်ဟင်းခါးတော့ မစားဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ့တော့ တော်တော်လေး စားဖြစ်တယ်။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို ဘူးသီးကြော်၊ ပဲကြော် ထည့်၊ အချဉ်များများ ညစ်၊ ကြက်သွန်စိမ်းလေး ထည့်ပြီး လွေးလိုက်ရတာ အတော့်ကို ကောင်းတာခင်ဗျ။ အသုပ်ဆိုရင်လည်း ကြာဇံ ဒါမှမဟုတ် ခေါက်ဆွဲသုပ်ကို မကျည်းနှစ်များများ၊ အကြော်ထည့်ပြီး စားရတာ ချဉ်ပြုံးချဉ်ပြုံးလေးပဲဗျ။ အသုပ်စားလိုက် ဟင်းခါးလေး သောက်လိုက်နဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့။
မုန့်ဟင်းခါးစားချင်ရင်တော့ လမ်းထိပ်ကိုထွက် ဈေးနားမှာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ မုန့်ဟင်းခါးကို အကြော်နဲ့ငရုတ်သီးမှုန့်တွေ ဖြူးပြီး အ၀အပြဲ ရှူးရှူးရှဲရှဲ လွေးလို့ရတယ်ကွဲ့။ အဲဒါတွေ စားရတာ ငြီးငွေ့သွားပြီဆိုရင် အိမ်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဘာစားချင်လည်း သွားမှာလို့ရတယ်လေ။ အီကြာကွေးကို ကျွပ်ရွနေအောင် နီရဲနေအောင် ကြော်ခိုင်းပြီး လက်ဖက်ရည်နဲ့ တို့ပြီးစားရတာ အတော်လေးကို အရသာရှိတယ်နော်။ တကျွပ်ကျွပ်နဲ့ စားလို့ကောင်းပဲ။ သုံးခါကိုက်စာပဲရှိတဲ့ စမူစာတွေကိုလည်း အချဉ်ရည်လေးနဲ့ စားလိုက်ရင် ဗဲရီးဂွတ်ပဲဗျ။ ပလာတာကို အထဲမှာ ပဲမထည့်ထားခိုင်းဘဲ ကျွပ်ရွနေအောင် အလွတ်ကြော်ပြီးမှ ပဲကို ဘေးမှာပုံထားပြီး ပလာတာနဲ့ ညှပ်ညှပ်ပြီး စားရတာလဲ စိမ့်နေတာပဲနော်။
နောက်ပြီးတော့ ထမင်းကြော်ကို ဘဲဥချဉ်ဟင်းလေးနဲ့ လွေးလိုက်ရရင် မနက်စာက တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေသွားတော့တာပါပဲ။ တခါတလေကျတော့လည်း လမ်းထိပ်က ကုလားမကြီးဆီက တိုရှည်ကို သကြားလေးနဲ့စား ဒါမှမဟုတ် ကီးမားတိုရှည်ကို ပူစီနံများများ မဆလာများများထည့်ပြီး မနက်စာ လုပ်လိုက်ရင်လည်း ခံတွင်းတွေမြိန်နေပြန်ရော။
ဈေးအရှေ့နားက ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲသုပ်လေးကို ရှမ်းချဉ်လေးနဲ့ စားဖြစ်ရင်လည်း အတော်ကို စားကောင်း သောက်ကောင်းလေးပါပဲ။ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ရင်းဈေးထဲ ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ ရွှေထမင်း၊ ဆီထမင်း၊ ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်း၊ ကောက်ညှင်းငချိတ်ကို နှမ်းထောင်း များများလေးထည့်ပြီး ပဲပြုတ်လေးနဲ့ မနက်စာ လုပ်လို့ရသေးတယ်။
မနက်စောစောထပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားကို လမ်းလျှောက်ထွက် ဘုရားဖူးပြန်လာရင် ဒတ်ဖရင်ဆေးရုံရှေ့က အာဆင်နယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာ မလိုင်နဲ့ နံပြား၊ အားလူးပူတီ၊ ကောက်ညင်းထုပ်၊ နန်းကြီးသုပ် ကြိုက်တာ မှာစားလို့ ရတယ်ခင်ဗျ။ အိမ်အနီးအနား တ၀ိုက်မှာ စားရတာ ငြီးငွေ့လာရင်လည်း သခင်မြပန်းခြံဘက်ကို စက်ဘီးလေး စီးပြီးထွက်သွားလိုက်ရင် လရိပ်၊ လပ်ကီးဆဲဗင်း စတဲ့ဆိုင်တွေမှာ အစားအစာ အစုံအလင်ကို ရနိုင်တယ်လေ။ သီတာရုံဘက်မှာလည်း အိုင်တီဆိုတဲ့ ဆိုင်ကလည်း စုံစုံလင်လင် တင်ထားတာဆိုတော့ တခါတလေ ခြေဦးလှည့်မိပါတယ်။
အခုဒီမှာက တခါလာလည်း ပေါင်မုန့်မီးကင်၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ ဘီစကစ်၊ ကိတ်မုန့်နဲ့ကို လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေတော့တာပဲ။ မနက်စာကတော့ စားရတာ ခံတွင်းမမြိန်ဘူးလေ။ အဆင်ကို မပြေပါဘူး။ တကယ်ပဲ လွမ်းမိပါတယ် ရန်ကုန်က မနက်စာလေးတွေကို ...
Posted by JulyDream at 10:01 AM4comments:
raeUu ay:wl*DEdkifiHrSm New7wonders udkaMunmoGm;cJhygw,f/ urÇmtESHUrSS tGefvdkif;ay:uae rJaygif; 100 Millions ausmf rJay;cJhMuygw,f/ 'D campaign tpDtpOfav;udk 2000 ckESpfrSm qGpfZmvefEdkifiHu pma&;q&m? &kyf&Sifxkwfvkyfol Bernard Weber u OD;aqmifNyD; pwifvIyf&Sm; cJhwmjzpfygw,f/ New7wonders awGuawmh ...
2. Rome's Colosseum
4. Peru's Machu Picchu
5. Brazil's Statue of Christ Redeemer
6. Jordan's Petra
7. Mexico's Chichen Itza pyramid yJjzpfMuygw,f/
[dk;a&S;,cifu tHcsD;zG,f ckESpfck (The ancient list of the7World Wonders)udk bDpD 200 rSm Philon u olwpfOD;wnf;taeeJU a&G;cs,fowfrSwfcJhwmyg/ The ancient list of the7World Wonders awGuawmh ...
2. the Temple of Artemis
3. the Statue of Zeus
7. the Pyramids of Egypt yJjzpfMuygw,f/ tcktcsdefrSmawmh urÇmrSm tD*spfu yd&rpfawGyJ usef&dSygawmhw,f/
tck urÇmUtHcsD;zG,f topf7ckudkawmh wpfurÇmvHk; tESHUuae rJaygif; 100 Millions ausmf jzifh a&G;cs,fcJhwmyg/ t"du a&G;cs,foGm;cJhwJh tcsufawGuawmh b,favmuf twdkif;twmtxd symbolism jzpfovJ? b,favmuftxd cufcufcJcJ wnfaqmufcJh&ovJ tay:rlwnfNyD; a&G;cs,foGm;cJhwmyg/
The ancient list of the7World Wonders awGxJu wpfckwnf;aom usef&dSaewJh tD*spfu yd&rpfawG&JU taMumif;uawmh ...
The only surviving structures of the original seven wonders, the three pyramids were built as tombs for 4th dynasty pharaohs about 4,500 years ago. The largest of the three pyramids, the 452-foot-high Great Pyramid, was built for King Cheops. Nearby is the Great Sphinx,alimestone statue with the face ofaman and the body ofalion.
tck topfa&G;cs,fxm;wJh New7wonders awG&JU tusOf;csKyfav;uawmh ...
The 4,160-mile barricade running from east to west in northern China is the longest man-made structure in the world. The fortification, which largely dates from the 7th through the 4th century B.C., was built to protect the dynasties from invasion by the Huns, Mongols, Turks and other nomadic tribes.
The giant amphitheater in Rome was inaugurated in A.D. 80 by the Emperor Titus inaceremony of games lasting 100 days. The 50,000-seat Colosseum, which has influenced the design of modern sports stadiums, was an arena where thousands of gladiators dueled to the death and Christians were fed to the lions.
The white marble-domed mausoleum in Agra was built by Mogul Emperor Shah Jahan between 1632 and 1654 for his favorite wife, Mumtaz Mahal, who died in childbirth. The complex - an example of Mughal architecture combining Indian, Persian, and Islamic styles - houses the graves of the emperor and his wife, as well as those of lesser royalty.
The 125-foot-tall statue of Christ the Redeemer with outstretched arms overlooks Rio de Janeiro from atop Mt. Corcovado. The statue, which weighs more than 1,000 tons, was built by Polish-French sculptor Paul Landowski in pieces in France starting in 1926, then shipped to Brazil. The pieces were carried by cogwheel railway up the mountain for assembly. The statue was inaugurated in 1931.
The ancient city of Petra in southwestern Jordan, built onaterrace around the Wadi Musa or Valley of Moses, was the capital of the Arab kingdom of the Nabateans. It also flourished under Roman rule after the Nabateans were defeated in A.D. 106. The city is famous for its water tunnels and numerous stone structures carved in rock, the most impressive of which is probably Ad-Dayr, an uncompleted tomb facade that served asachurch during Byzantine times.
uRefawmf rJay;cJhwJh ckepfckxJu av;ckawmh New7wonders rSm pm&if;0ifoGm;ygNyD/ 'gayr,fh ,leufpudk&JU txdrf;trSwf vdk*dkjzpfwJh atoifu Acroplis &,f? acwfopfAdokum vuf&mrSm pHwif&avmufwJh qpf'eDu atmfy&ma[mufpf&,f? Cambodia u tefaum0yf ausmif;awmfBuD; a&G;cs,frcH&wmudkawmh pdwfraumif;jzpfrdygw,f/ uRefawmfwdkU jrefrmjynfu yk*H a&S;a[mif; ,Ofaus;rI e,fajru Zumwif tqifhrSmawmif rygbl;Asm/
Posted by JulyDream at 12:12 PM No comments:
၀၇ ၀၇ ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက် ဒီကနေ့ ၀၇-၀၇-၀၇ ဖြစ်တဲ့နေ့ပဲလေ။ ၀၇ ၀၇ နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အတိတ်သမိုင်းတွေ... သာမာန်ရိုးရိုး ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လေးတွေ လောကကြီးမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာတွေ၊ လေးစားဂုဏ်ယူစရာတွေ၊ ထူးထွေဆန်းပြားတာတွေ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ၊ မွန်းကျပ်နစ်မွန်းခဲ့ရတာတွေ၊ ကြေကွဲဆို့နစ်စရာတွေ သမိုင်းနေ့စွဲတွေမှာ အထင်ကရ ရှိနေမှာပါ။ ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ ၀၇ ၀၇ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် ဘ၀လေးထဲက အမေနေ့ပေါ့ဗျာ။ အမေများနေ့ မဟုတ်ဘူးနော်။ အမေနေ့ပါပဲ။
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ အမေ ကျွန်တော်ကို မွေးဖွါးခဲ့တယ်။ သားဦးမို့လို့ မွေးရခက်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ကျွန်တော်ကို မွေးတုန်းကဆို တော်တော်လေး ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ မွေးမလိုလို ဗိုက်နာခဲ့ပြီးမှ ငါးရက်လောက်ကြာမှ မွေးခဲ့တာလေ။ နှစ်ဘက်စလုံးက အဖိုးတွေဆိုရင် ကလေး အသက်မရရင်နေပေစေ့ လူကြီးအသက်ပဲ လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အထိတောင် မွေးရဖွားရခက်စေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ပါ။ ဒါပေမယ့် အမေက အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းမှုတွေကို ကြံကြံခိုင်ရင်ဆိုင်ပြီး ဇွဲမလျှော့ဘဲ ကျွန်တော်ကို သဘာဝအတိုင်း မွေးခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လရဲ့ အိပ်မက်လေးတစ်ခု တကယ်အမှန်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဇူလိုင်အိပ်မက် ၀၇ ၀၇ ကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပဲ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးသူမတစ်ချို့က ပြောတယ် ကျောင်းသားသေလို့ လူပြန်ဝင်စားတယ် ထင်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုယ်မှာလည်း မွေးရာပါ အမှတ်တွေက နေရာအနှံ့မှာ ပါလာသေးတယ်လေ။ အဲဒါဆိုရင်လည်း လူ့ဘ၀ကို တစ်ခါပြန်လာခွင့် ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေ။ အမေမွေးရကျိုးနပ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ဆက်လက် ကြိုးစားနေမှာပါအမေ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော် မွေးနေ့ တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီပေါ့နော်။ ဒီမွေးနေ့လေးက တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ ကြုံနိုင်တဲ့ မွေးနေ့လေးပါ။ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ကျွန်တော် သွေးဘဏ်မှာ သွေးသွားလှူဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ အလှူဒါနဖြစ်တဲ့ သွေးလှူဒါန်းမှုလေးနဲ့ အမေ့ကျေးဇူးကို ဆပ်လိုက်ပါရစေ။ မွေးကျေးဇူးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်ဆပ်တဲ့ကျေးဇူးတွေက ဘာမျှမပြောပလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်သလောက်လေးတော့ ဆပ်နေပါရစေ အမေ။ အမေတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ။
အမေ့အတွက် ကျွန်တော် အင်တာနက်က ရှာတွေ့ထားတာလေး ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါမှာ အမှတ်တရအဖြစ် တင်လိုက်ပါရစေ။
Put them all together,they spell "MOTHER,"
Posted by JulyDream at 9:52 AM3comments:
'DuaeUu 7-7-2007 yg/ wpfoufrSm wpfcgyJBuHKwwf&wJh tcsdeftcgrsdK;av;udk uRefawmfwdkUawG tckBuHKcJh&NyDav/ 'DaeU'Dtcsdeftcgvdk 07-07-07 jzpfzdkUqdkwm aemufxyfESpfaygif;wpf&m 2107 ckESpfusrS xyfrHqHkawGU&rSmqdkawmh uRefawmftaeeJU xyfrH BuHKqHkzdkUqdkwm uHaouHr ajymEdkif& avmufatmif rusdrf;aobl;av/ tJ'gaMumifh wpfoufrSm wpfcgwm BuHKawGUEdkifw,fvdkU ajymrdwm uRefawmf rvGefbl;vdkU qdkEdkifygw,faemf/
BuHKawmihfBuHKcJ 'DvdktcsdeftcgtwGuf urÇmwpf0Srf;rSmawmh xll;xl;jcm;jcm; tpDtpOfawG? aysmfyGJ&TifyGJawGudk usif;yzdkU pDpOfxm;MurSmyg/ tJ'DtpDtpOfawGxJu uRefawmf &ifckefpdwf0ifpm;wJh tpDtpOfwpfckuawmh New7Wonders aMunmr,fh tpDtpOfyg/ qGpfZmvefEdkifiH New7Wonders tzGJUu07-07-07 rSm urÇmtHzG,f topftjzpf a&G;cs,fcHxm;&wJh ae&m-ckepfckudk ay:wl*DEdkifiH vpfpbGef;NrdKUrSm aMunmrSmyg/ (The New7Wonders of the World will be announced during the OfficialDeclaration ceremony in Lisbon, Portugal on Saturday, July 7, 2007 -07.07.07.) ay:wl*DEdkifiHu Zumwif a&G;cs,fvsmxm;wJh tHzG,fpm&if;xJrSm rygwJhtwGuf qkaMunmr,fh Mum;aeEdkifiHtaeeJU a&G;cs,fcH&wmyg/
a&G;cs,fzdkU vsmxm;wJh pm&if;xJrSm -
1. The Acroplis of Athens (450-330 B.C) Athens, Greece 2. Alhambra (12th century) Granada, Spain 3. Angkor (12th century) Cambodia 4. The Pyramid at Chichén Itzá (before 800 A.D.) Yucatan Peninsula, Mexico 5. Christ Redeemer (1931) Rio de Janeiro, Brazil 6. The Roman Colosseum (70 - 82 A.D.) Rome, Italy 7. Statues of Easter Island (10th - 16th Century) Easter Island, Chile 8. The Eiffel Tower (1887 - 89) Paris, France 9. The Great Wall of China (220 B.C and 1368 - 1644 A.D.) China 10. The Hagia Sophia (532 - 537 A.D.) Istanbul, Turkey 11. Kiyomizu Temple (749 - 1855) Kyoto, Japan 12. The Kremlin and Red Square (1156 - 1850) Moscow, Russia 13. Machu Picchu (1460-1470), Peru 14. Neuschwanstein Castle (1869 -1884) Schwangau, Germany 15. Petra (9 B.C. - 40 A.D.), Jordan 16. The Pyramids of Giza (2600 - 2500 B.C), Egypt 17. The Statue of Liberty (1886) New York City, U.S.A. 18. Stonehenge (3000 B.C. - 1600 B.C.) Amesbury, United Kingdom 19. Sydney Opera House (1954 - 73) Sydney, Australia 20. The Taj Mahal (1630 A.D.) Agra, India 21. Timbuktu (12th century) Mali pwmawG yg0ifygw,f/
rJay; a&G;cs,f&rSmu ckepfckyJ jzpfawmh rJay;&wmawmif tm;rvdk tm;r&jzpfrdw,f/ uRefawmfwdkU jrefrmEdkifiHu ajymifajrmufwJhAdokum tEkynmvuf&mawG xHkrGrf;xm;wJh a&S;a[mif;bk&m;awG vufndK;xdk;rvGJ wnf&dSaewJh yk*Ha&S;a[mif;e,fajr ygrvmwmudkawmh qdkUepfaMuuGJcHpm;rdygw,f/ uRefawmhf pdwfxJrSmuawmh pGJaqmifrI aumif;vGef;wJh urÇmtHzG,fawGu ckepfckru &dSaecJhygw,f/ 'geJUyJ rJaMunmr,fh 07-07-07 eJU 21&uftvdk 15.6.2007rSm uRefawmfpdwfBudKuf tHzG,f ckepfckudk wpfoufrSm wpfcgyJBuHK&wJh ordkif;0ifr,fh tcGifhta&;taeeJU urÇmol urÇmom;wpfOD; taeeJU rJay;a&G;cs,fcJhygw,f/ 'gayr,fh uRefawmfpdwfBudKuf a&G;xm;wJhtHzG,fawGu tjcm;olawGeJU tBudKufcsif; wlcsifrS wlMurSmyg/ vlwpfudk,f tBudKufwpfrsdK;yJav/
uRefawmf &ifckefoHxyfwljyKNyD; a&G;cs,fcJhwJh tHzG,f ckepfcku atmufu pm&if;rSm pkpnf;azmfjyxm;wmawGygyJ/
1. The Acroplis of Athens (450-330 B.C) Athens, Greece 2. Angkor (12th century) Cambodia 3. The Roman Colosseum (70 - 82 A.D.) Rome, Italy 4. The Great Wall of China (220 B.C and 1368 - 1644 A.D.) China
5. Petra (9 B.C. - 40 A.D.), Jordan
6. Sydney Opera House (1954 - 73) Sydney, Australia 7. The Taj Mahal (1630 A.D.) Agra, India
1. The Acroplis of Athens (450-330 B.C) Athens, Greece
Built atop what is known as the “Sacred Rock” of Athens, the Acropolis was to radiate power and protection for its citizens. The temples of the Acropolis have become the some of most famous architectural landmarks of ancient and modern history.
2. Angkor (12th century) Cambodia
Angkor is the most important monument of the south-east Asian Khmer Empire and the world’s largest sacred temple. Built during the reign of King Suryavaman, at the beginning of the 12th century, Angkor is noted for its intricate ornamentation and striking beauty.
3. The Roman Colosseum (70 - 82 A.D.) Rome, Italy
This great amphitheater in the centre of Rome was built to give favors to successful legionnaires and to celebrate the glory of the Roman Empire. Its design concept still stands to this very day, and virtually every modern sports stadium some 2,000 years later still bears the irresistible imprint of the Colosseum's original design.
4. The Great Wall of China (220 B.C and 1368 - 1644 A.D.) China
On the edge of the Arabian Desert, Petra was the glittering capital of the Nabataean empire of King Aretas IV (9 B.C. to 40 A.D.). Masters of water technology, the Nabataeans provided their city with great tunnel constructions and water chambers. A theater, modelled on Greek-Roman prototypes, had space for an audience of 4,000.
6. Sydney Opera House (1954 - 73) Sydney, Australia
When the Sydney Opera House was finished in 1973, this landmark building - in the true sense of the expression, - put the whole continent of Australia on the world map. This building does not imitate or reflect what we generally imagine an opera house might look like, indeed, it isacompletely abstract interpretation.
uRefawmftaeeJU tHzG,f ckepfckudk rJay;a&G;cs,fcJhwJh t"du tcsufawGuawmh
for the Acropolis, because it isagreat symbol of - Civilization & Democracy!
for Angkor, because it isagreat symbol of - Beauty & Sanctity!
for the Colosseum, because it is nowasymbol of - Joy & Suffering!
for the Great Wall of China, because it is incredible proof of - Perseverance & Persistence!
for Petra, as it isagreat symbol of - Engineering & Protection!
for the Sydney Opera House, because it reflects - Abstraction & Creativity!
for the Taj Mahal, the greatest symbol of - Love & Passion! aMumifhyJ jzpfygw,f/
07-07-07 &JU rsm;rMumrDaom tcsdeftawmtwGif;rSmyJ urÇmhtHcsD;zG,f topf ckepfck&JU pm&if;udk ay:wl*DEdkifiHrSm xkwfjyefaMunmawmhrSmyg/ b,fEdkifiH&JUtHzG,fu urÇmh tHcsD;zG,f topfckepfck&JU pm&if;udk 0ifvmrvJqdkwmudk &ifckefpGmeJU apmifhpm;MunfUMuwmayghAsm/ udk,fxifxm;rSef;xmwmawG jzpfrvm&if ta&G;rcH&&ifvnf; 07-07-07rSm aysmfaysmfyg;yg;av;yJayghaemf/
Credit to- http://www.new7wonders.com
Posted by JulyDream at 7:07 AM No comments: